admin – MATRD
Date: February 11, 2020 Author: admin Leaveacomment on Passive and Active Noise Cancellation အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ကွာခြားချက်များ
ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဖုန်း၊ နားကြပ်နှင့် digital assistants များဖြစ်သည့် Google Assistant နှင့် Siri
တို့တွင် Noise Cancellation သို့မဟုတ် ဆူညံသံလျှော့ချချင်းနီးပညာကို အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။
Passive Noise Cancellation အလုပ်လုပ်ပုံမှာ အလွန်ပင်နားလယ်ရလွယ်ကူသည်။
ဥပမာ- နားကြပ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သီချင်းနားထောင်သောအခါ ပြင်ပအသံများနားထဲသို့မဝင်လာနိုင်ရန် နားကြပ်တစ်ဖက်စီ၏ထိပ်တွင် ရာဘာခေါင်းများစွပ်ထားချင်းဖြစ်သည်။
ပိုမိုပြည့်စုံအောင်ပြောရလျှင် အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများသုံးပြီး ပြင်ပအသံမကြားအောင် ပြုလုပ်ချင်းဖြစ်သည်။
Active Noise Cancellation အလုပ်လုပ်ပုံမှာ
mic မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီး ပြင်ပအသံများကို မကြားရအောင်ပြုလုပ်ချင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံမှာ ပြင်ပအသံများကို mic ဖြင့်ဖမ်းယူပြီး နားဖြင့်မကြားနိုင်သော audio frequency ကိုပြောင်းလွှဲပေးချင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ- သင်ဆူညံသည့်နေရာမှ ဖုန်းပြောသောအခါ တစ်ဖက်လူသည် သင့်အသံသီးသန့်ကို ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ဖုန်းတိုင်းတွင် Active Noise Cancellation မပါဝင်ပါ။
ဈေးကြီးပေးရသောအချို့နားကြပ်များတွင် Passive နဲ့ Active Noise Cancellation နှစ်ခုစလုံးပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
Date: February 11, 2020 Author: admin Leaveacomment on Myanmar Money Reader
Read aloud the value of Myanmar Currency bank note
ဗိလ်ချုပ်ရုံပုံပါ ၁၀၀၀ ကျပ်တန်နှင့် ကင်မရာပုံ
How to use Myanmar Money Reader Application
Myanmar Money Reader works by using the camera on the back of your phone to recognize Myanmar Kyat bills and the default TTS installed on your phone to read aloud the value of them.
Make sure your phone is in portrait mode and your money is in landscape mode. Show the back of your money to the back camera of your phone.
Distance is important. You should try to find the right distance to hold your phone away from the money. Every phone isalittle different.
Try to orient your money in the same direction as your phone. This helps ensure that the camera can see most of the bill.
Beware of counterfeit currency. Myanmar Money Reader is notacounterfeit detector. Be sure to check the weight and feel of the paper before trusting the bill.
Separate your money. If Myanmar Money Reader sees many bills laid on top of each other, it tends to get confused and is less likely to report anything. It is best to remove each bill from the field of view before trying another one.
Get it on Playstore image
Date: February 7, 2020 Author: admin Leaveacomment on Myanmar TTS Windows version အား Cortana အသံဖြင့်အသုံးပြနည်း လမ်းညွန်
Cortana logo နှင့် စက်ရုပ်အမျိုးသမီးမျက်နှာပုံ
Windows အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ Myanmar TTS (NHMTTS) မှာ English အသံထွက်ပိုင်းအတွက် အသံထွက်ပိုမို ရှင်းလင်းပြီး သွက်သွက်လက်လက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Microsoft Cortana ကို Microsoft Speech API 5(SAPI5) မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Windows 10, 64-bit version မှာဘဲ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းအသုံးပြုဘို့အတွက် အောက်ကနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
၁။ Microsoft Cortana အသံအား ဤလင့်မှ download ဆွဲပါ။ Download Microsoft Cortana for Sapi5
၂။ Download ဆွဲထားသော zip ဖိုင်အားဖြည်ပြီး၊ ပါလာသော file နှစ်စလုံးအား install လုပ်ပါ။
၃။ NHMTTS voice configuration dialog ကို Windows Start Menu မှဖွင့်ပြီး Non-Burmese Voice မှာ Cortana အား ရွေးချယ်ကာ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Date: February 7, 2020 Author: admin Leaveacomment on Open source Text-to-Speech ဘာသာစကားများ
eSpeak မှာ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ TTS ဘာသာစကားတွေကို download ရယူနိုင်ပါတယ်။ eSpeak တွင်ရယူသုံးစွဲနိုင်သော ဘာသာစကားစာရင်းများ eSpeak တွင်ရယူသုံးစွဲနိုင်သော ဘာသာစကားစာရင်းများ
eSpeak တွင်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး၏ အသံများ download ဆွဲအသုံးပြုရန်-
Browser မှ ဤလင့်သို့ သွားပါ http://espeak.sourceforge.net/download.html.
“Compiled for Windows” version အား download ဆွဲပါ, file အမည် setup_espeak-1.48.04.exe.
Download လုပ်ပြီးသောအခါ Install စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
Install ထည့်မည့် location အား ရွေးချယ်ပြီး next နိပ်ပါ။
ဘာသာစကားတစ်ခု၏ ကိုယ်စားပြု ကုတ် ၂ လုံးအားထည့်သွင်းပါ။
Next ကို၂ ဆင့်နိပ်ပြီး install နိပ်ပါက အောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြီးသွားပါပြီ။
Date: February 7, 2020 Author: admin Leaveacomment on Windows 10 Text To Speech Language အသစ်ထည့်နည်းလမ်းညွန်
Windows 10 ရဲ့ edition အားလုံးမှာ လုပ်ဆောင်နည်းတူညီပါတယ်။ Start> Settings ကိုသွားပြီး၊ အောက်ကနည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
၁။ Windows key နိပ်ပြီး start button ကိုဖွင့်ပါ။ Settings > Time & Language > Region & Language ကိုသွားပါ။
၂။ Addalanguage ကိုရွေးပြီး၊ list ထဲမှ မိမိရွေးချယ်လိုသော ဘာသာစကားကိုရွေးပါ။
၃။ ဘာသာစကားအသစ်ထည့်ပြီးနှောက် options ကိုသွားပါ။
၄။ Language options> Speech, အောက်မှ Download ကိုရွေးချယ်ပါ။
၅။ Computerကို restart လုပ်ပါ။ Windows ပြန်တက်လာတဲ့အခါ မိမိ ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါမယ်။
Windows တွင်အသုံးပြုနိုင်သော TTS ဘာသာစကားများနှင့် အသံများ
Catalan Spanish (Spain) Not applicable Herena
China (zh-CN) Kangkang Huihui, yaoyao
Hindi (India) Hermant Kalpana
Hong Kong (zh-HK) Danny Tracy
Taiwan (zh-TW) Zhiwei Yating, Hanhan
Thai (Thailand) Pettara Not applicable